आश्रय दिने बहानामा पीडितमाथी शोषण, <br>. डलर असुल्ने पीडितलाई लखेट्ने खेलमा रक्षा नेपालकी थापा
HomeAparadh Khabarआश्रय दिने बहानामा पीडितमाथी शोषण,
. डलर असुल्ने पीडितलाई लखेट्ने खेलमा रक्षा नेपालकी थापा
आश्रय दिने बहानामा पीडितमाथी शोषण,
aparadhkhabar.com 8:20 AM
काठमाडौं । रक्षा नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले संघ संस्था ऐन विपरित काम गरिरहेको खुलासा भएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष मेनुका थापाले प्रहरी र प्रशासनको कुनै पत्र र सिफारिस विना नै बालबालिका राख्ने तथा उनीहरुको नाममा दातृ निकायबाट आएको सहयोग दुरुपयोग गर्दै आएकी छन् ।
संस्थामा आश्रित बालबालिकालाई भने उनले जुनसुकै समयमा निकाल्ने र राख्ने गरेकी छन् । जबकि पठाउने वा बुझाउने र बुझ्ने संस्थाबीच प्रष्ट रुपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र संस्थामा बालबालिका राख्न सकिने कानुनी ब्यवस्था छ ।